Ungazilungisa kanjani izitayela zezinwele ezimfushane ezingabonakali Amadoda aSitayela
U-Alicia tomero | | Ukunakekelwa komuntu siqu, Izitayela zezinwele
Siyazi ukuthi asizithandi izibopho, sihlala sithanda ukugqoka ngokunganaki futhi sigqoke izinwele ezimfushane ezingathathi isikhathi eside ukuzilungisa, noma ezinamathele kakhulu. Singahlala sikhetha ukuyikama futhi siyigqoke iqinile futhi icocekile, noma sinjani isimo sokwenza isitayela esingasetshenzisiwe lokho kuthwala uphawu lwethu futhi kuchaza ubunikazi bethu.
Ukugqoka izinwele eziphazamisekile ungamaka leso sitayela esithanda ukugqoka, Akufani nokuyishiya njengoba usanda kuvuka embhedeni noma uyiyeke idanse ngejubane layo, kunokugqoka ukubukeka okungahlelekile kodwa ngalowo muhle, ukhululekile futhi ucocekile.
Ukuthola lezi zinwele ezifakwe emadodeni isitayela esingenankinga kodwa futhi nesendalo, kuyindaba yokuthatha izinyathelo ezimbalwa ezilula ukukwazi ukubona isimo esifanele ubuso bakho nendlela yakho yokuphila.
1 Yikuphi ukugunda izinwele okufanele ukugqoke?
2 Amathiphu ngaphambi kokunikeza lokho kubukeka kwe-tousled
3 Izitayela zezinwele zisike "ukusika okudala"
4 Fade zezinwele
5 Izitayela zezinwele ezinezinwele ezisontekile
6 Izitayela zezinwele ezimfushane kepha zinde ngaphezulu
Yikuphi ukugunda izinwele okufanele ukugqoke?
Ukugunda izinwele kuyinto ebalulekile ekutayeleni nobuntu bendoda. Izitayela zezinwele ezingamukelwa ziseyisici abaningi abangasinaki futhi abanandaba nokuthi bangaphinde bazenze kanjani ngokuya ngobuso babo.
Kodwa-ke, ukugunda izinwele kufanele kube yinto ehlala ikwenza udlidlize ngokuvumelana, okuthandayo, lokho kulula futhi kukhululekile futhi akuholeli kumthwalo uma kuziwa ekuyigcineni. Futhi kuthiwani ngezinwele ezisontekile?
Abesilisa abanezinwele ezisontekile abanazithiyo eziningi kangako leyo minyaka edlule, bangalawula ama-curls abo ngokunye okuhle kwemikhiqizo yezinwele esemakethe. Ngalolu hlobo lwezinwele futhi singadlala ngemikhiqizo futhi ubaphathe ngendlela yokuhlubuka neyolinganiswa.
Kulonyaka, izinwele zakudala ezinokuhlukaniswa phakathi zizokwakha umkhuba, kanye nezitayela zezinwele ohlangothini, ikakhulukazi ezinwele ezi-wavy. Isitayela se-hipster naso sizobe singesinye sezinwele ezingasali eceleni kulo nyaka. Yize isitayela sakhe singaweli ngaphakathi kwezinwele zethu ezixegisiwe, kepha sizilungise kahle.
Amathiphu ngaphambi kokunikeza lokho kubukeka kwe-tousled
Ukunakekelwa okufanele kwezinwele ezinempilo kuhlale kubalulekile futhi ukuwasha kahle ngomkhiqizo okhokhelwayo kubalulekile, uma kungenzeka ngaphandle kasawoti. Akudingekile ukugeza izinwele zakho nsuku zonke, lokho kuzokukwenza kungabi okuqonde kakhulu futhi okuyisicaba. Ngale ndlela uzokwakha kangcono owoyela bakho bemvelo, lokho kuzokunika ivolumu ethe xaxa futhi kusize ubujamo bakho buphawuleke kangcono.
Imikhiqizo ezokwazi ukulungisa izinwele futhi ikwazi ukuyimisa kufanele ibe yanele. Kufanele basize ukunikeza lowo mlingiswa nevolumu ukuze ihlale isikhathi eside kakhulu. Okwakho kubalulekile ukulungisa izinwele ngemikhiqizo yekhwalithi, Sishiya umphumela we-gloss noma we-matte ezandleni zethu.
Izitayela zezinwele zisike "ukusika okudala"
Yindlela yokugunda izinwele emfishane, eyeyesikhathi sokuphila futhi kungaqinisekiswa ngokufanele ukuthi umphumela othukuthele kuzoba lula ukukwenza. Singathatha kancane i-wax noma i-gel ngomphumela we-matte phakathi kweminwe yesandla. Ngemuva kwalokho yisebenzise umucu ngentambo ezinweleni, ukhiphe imicu ngendlela ehlelekile futhi efundwayo.
Kuyinto yekhanda elonakele, eligundiwe kakhulu ezinhlangothini futhi lide ngokwengeziwe phezulu. Senza inqubo efanayo nezinyathelo zangaphambilini, sisebenzisa okuthe xaxa komkhiqizo wethu ezandleni bese sikusabalalisa ezinweleni, sikhiye ngokukhiya futhi sakha isakhiwo esingajwayelekile.
Izitayela zezinwele ezinezinwele ezisontekile
Izinwele ezisontekile ngokungangabazeki ziyafana nezinxushunxushu, kepha konke kulawulwa. Akukhathalekile ukuthi unawo ama-wavy, agobile kakhulu, ahle kakhulu noma kunzima ukuwazi kahle, kufanele ulinge ukuzama izinto ezintsha futhi ezihlukile. Ngokuzijwayeza sihlala sithola umphumela esiwuthandayo.
Njengesincomo, uvame ukukhetha ukuvumela izinwele zakho zome ngokwemvelo noma ngosizo lokomisa izinwele. Kamuva sisebenzisa umkhiqizo phakathi kwezandla zethu bese siwukhama ezinweleni ukuyinika isimo sokuhlubuka. Lapho-ke ekugcineni ungayiqedela enye into nge-hairdryer.
Izitayela zezinwele ezimfushane kepha zinde ngaphezulu
Ngalokhu kubukeka kulula kakhulu ukunikeza lokho kubukeka okuxakile. Yilelo khanda elinezinwele ezimfishane ezinhlangothini futhi lizishiya lide kakhulu phezulu. Ngalesi sakhiwo ungamaka isitayela sakho bese wenza lokho kubukeke kulula kakhulu ukukhubeka. Ufaka i-wax yakho noma umkhiqizo wokulungisa phakathi kwezandla zakho bese ukuvumela ukuthi kugcwale ubuhle.
Kulabo kini abanezinwele ezinde, kodwa ngama-bangs eceleni nayo izolungela impela. Sishisa i-wax phakathi kwezandla zethu bese siyinika ukuma nokunyakaza size sithole isimo esifanele.
Uma usuvele ucacile, kuyinselelo enhle ukwenza isimo sethu sibe semthethweni ngaphandle kwemithetho. Ngokuphambene nalokho, uma isitayela sakho sincike ekubeni nohlobo oluthile lwezinwele ezikhethekile noma udinga noma uhlobo oluthile lwekhanda elikhetheke kakhudlwana, ungafunda izindatshana ezifanayo esigabeni sethu se izinhlobo zezinwele.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Ungazitayela kanjani izinwele ezifushane ezifakiwe
Ukuzivocavoca kwe-Lower abs